Diofizisma - Wikipedia
Ny diofizisma na diofizitisma dia fampianarana kristolojika noraisin'ny konsily ekiomenika fahefatra, dia ny Konsily tao Kalkedona tamin'ny taona 451 izay manambara ny maha tokana an'i Kristy manana natiora roa tsy mifangaro sy tsy miova ary tsy mizara no tsy misaraka.
2 Tantaran'ny diofizisma
Ny teny hoe diofizisma na diofizitisma dia avy amin'ny teny grika hoe δυοφυσιτισμός / duofusitismos izay azo rasaina amin'ny teny hoe δυο / duo (midika hoe "roa") sy ny hoe φύσις / phusis ("natiora").
Tamin'ireo taona nanaraka ny Konsily tao Kalkedona dia tsy nanaiky ny fanapahan-kevitr'io konsily io sady nisaraka tamin'ny "ortodoksia" (fampianaram-pinoana ofisialin'ny Fiangonana) ny Fiangonan'i Antiokia sy ny an'i Aleksandria ary ny an'i Armenia izay natao hoe "monofizita" nefa raha ny tena marina dia nitory ny "miafizisma" (natiora tokan'i Kristy, izay sady Andriamanitra no olombelona: Kristy iray manana natiora roa).
Ny diofizisma, izay hita ao amin'ny Fiekem-pinoan'i Kalkedona, dia mitory Kristy iray manana natiora roa izay tsy mifangaro sy tsy miova ary tsy mizara no tsy misaraka. Inty ilay fiekem-pinoana:
"Araka ireo Ray masina izany, izahay dia mampianatra amim-piraisam-peo fa mitory Zanaka iray sady tokana, dia ny Tomponay Jesosy Kristy, ilay tanteraka amin'ny maha Andriamanitra azy, sy tanteraka amin'ny maha olombelona azy, Andriamanitra tokoa ary olona tokoa misy fanahy misaina sy vatana, mitovy maha izy azy amin'ny Ray araka ny maha Andriamanitra azy sy mitovy maha izy azy amintsika araka ny maha olombelona azy, manahaka antsika amin'ny lafiny rehetra afa-tsy amin'ny fahotana, nateraky ny Ray talohan'ny fotoana rehetra araka ny maha Andrimanitra azy, ary amin'ny andro farany izy tenany ilay (nateraka) ho antsika sy ho an'ny famonjena antsika avy amin'ny Maria Virjiny, Renin'Andriamanitra araka ny maha olombelona azy, Kristy iray sady tokana, Zanaky ny Tompo, izay hany nateraka, ekena fa manana natiora roa, tsy mifangaro, tsy miova, tsy mizara ary tsy misaraka, ny mahasamihafa ireo fomba roa ireo dia tsy foanan'ny fiombonana, ny toetran'ny fomban'ny natiora tsirairay dia voatahiry sady mandray anjara amin'ny persona sy hipostazy iray, dia Kristy tsy mivaky sy tsy misaraka ho persona roa, fa Zanaka iray sady tokana, tokana nateraka, Andriamanitra Teny, Tompo Jesosy Kristy."
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Diofizisma&oldid=975773"
Dernière modification le 18 Oktobra 2019, à 11:15
Voaova farany tamin'ny 18 Oktobra 2019 amin'ny 11:15 ity pejy ity.